သူ မ ကို ဒီ ချိန် မှာ ပါ တီ စွဲ မ လုပ် ရ ဘူး လို့ လာ ပြော တဲ့ သူ ကို တိ ကျ ပြတ် သား တဲ့ စ ကား လုံး တွေ နဲ့ ချက် ကျ လက် ကျ ထောက် ပြ ပြော ဆို လိုက် တဲ့ သက် မွန် မြင့် – Shwe Myanmar
သူ မ ကို ဒီ ချိန် မှာ ပါ တီ စွဲ မ လုပ် ရ ဘူး လို့ လာ ပြော တဲ့ သူ ကို တိ ကျ ပြတ် သား တဲ့ စ ကား လုံး တွေ နဲ့ ချက် ကျ လက် ကျ ထောက် ပြ ပြော ဆို လိုက် တဲ့ သက် မွန် မြင့်
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ အချစ်တော် အကယ်ဒမီသက်မွန်မြင့်ဟာ ဆိုရင် ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို တိကျပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် အကယ်ဒမီဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပရိတ်သတ်တွေချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ ချစ်သက်က သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာအင်မတန်မှထူးချွန်လှပြီး
သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ မျက်နှာေ လးက ပရိတ်သတ်တွေ ကို အချစ်ပိုစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ တိုင်းရင်းသူမလေးချစ်သက်ကရဲ့ စကားပြောပုံလေးကဆိုရင်လည်း ပရိတ်သတ်တွေကို ထူးထူးခြားခြား ဆြွဆော င်မှုရှိနေတာဆို ရင် လ ည်းမမှားပါဘူးနော်.။ ချစ်သက်က သူမကိုအရမ်းချစ်ပြီွးှရမ်းအလိုလိုက်တဲ့ ခင်ပွန်းအပြင်
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားလေး နဲ့မီးမီးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သားယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားဆုေ လး ကိုပိုင် ဆို င်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်လည်း သက်မွန်ဟာ နေ့တိုင်းလမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒေ ဖာ်
ထုတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း သူမကို ဒီချိန်မှာပါတီစွဲ မလုပ်ရဘူးလို့ ကွန့်မန့်မှာလာပြောတဲ့သူကို အခုလိုပဲ ချက်ကျလက်ကျထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တာပဲဖစ်ပါတယ်နော်။ သက်မွန်က “ဒီချိန်မှာ ပါတီ စွဲ မလုပ်ရဘူးတဲ့ သက်မွန်ကို ကွန်မန့်မှာ လာပြောတယ်!သက်မွန် လေးစားရတဲ့ အမေစုက NLD ဆိုမှတော့ ကိုယ်လည်း NLD ပေါ့! ရှင်းနေတာကိုတခြား
ဘယ်သူများ သူ့လောက် လေ အားကိုးစရာ ရှိလို့လဲဟင်?? စဉ်းစားကြည့်ပါ! ကမ္ဘာတဝန်းက လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့, မျက်နှာချီ ရင်ကော့ပြီး လျှောက်နိုင်တဲ့သူ( အရည်ချင်းပြည့်လျှံနေလို့ကို ယုံကြည့်မှုအပြည့်နဲ့ လျှော က်ရဲ တာ) နဲ့ပြည်တွင်းမက တကမ္ဘာလုံးက ဝိုင်းလက်ညှိုးထိုး ရှုံ့ချခံရသူ ဘယ်ခေါင်းဆောင်အောက် မှာ သင် နောက်လိုက်ဖြစ်ချင်သလဲ?
ရာစုတွေနဲ့ချီပြီး အုပ်ချုပ်မှုမှာ ပြည်သူကလွဲ သူတို့ ချမ်းသာသွားတာ နဲ့ သူတို့ကလွဲ ပြည်သူ ချမ်းသာသွားတာ ( ဒါတောင် ၅ နှစ်ထဲနော်)ဘယ်သူ့ကို သင် ယုံကြည်မလဲ? မေတ္တာတရား ကြီးမားပြီး ပြည်သူသည်သာ အဓိက ဆိုတဲ့သူနဲ့ သူ့တဘို့ အတ္တတွက် သန်းချီပြည်သူ ပူဆွေးသောက ဒုက္ခရောက်စေသူ
ဘယ်သူက သင့်ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမယ်လို့ ယုံကြ ည်သလဲ???ခုလည်း လက်တွေ့ မြင်နေရတယ်မလား?အကြောက်တရားတွေနဲ့ ရှင်သန်ရတဲ့ ဘဝ ရွေးချင်သေးလား?? ဖိနှိပ်မှုတွေ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ အဓမ္မတွေနဲ့ ရှင်သန်ရမယ့် ဘဝကို မ လိုချ င်တော့ဘူးဆိုရင် ဒီအရေးတော်ပုံ အောင်ရေး သင်
တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ပေးပါ! အဓိက သော့ချက် CDM ! CDM လုပ်ပြီး သူရဲကောင်းအဖြစ် မှတ်တမ်း အတ င်ခံမလားနို င် ငံ့သူ ပုန်အားပေး အဖြစ် မျက်နှာအငယ်ခံမလား အခွင့်အရေးဆိုတာ ၂ ခါပြန် မရဘူးနော်! ” ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရင်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြထေားပါတယ်.။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ် သ တ်ကြီး ကို အထူးပဲကျေးခူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုမှာ စစ်အာဏာရှင်များနဲ့ မည်သည့်အလုပ်ကိုမျှ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်း ပြတ်သားစွာပြောလာတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကို CDM မှာပါဝင်ပေးကြရန် နေပူထဲမှာ မမောနိုင်မပန်းနိုင်အောင်တောင်းဆိုရင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတဲ့ ဖွေးဖွေး
“ပြိုမလေေးတှအေတှကျ အစားလြှော့စားစရာ မလိုဘဲ ပိနျသှယျစမေယျ့ နညျးလမျး ( ၇ ) ခု”